Nagu saabsan - Shirkadda Shanghai Teamstand
Si aad u noqoto Top 10 qeybiye caafimaad ee Shiinaha
Shirkadda 'Shanghai Teamstand Corporation' waa shirkad xirfadle ah oo wax soo saar u leh alaabada iyo xalalka caafimaad. “Caafimaadkaaga”, oo si qoto dheer ugu qotoma qof walba quluubtiisa kooxdeena, waxaan diiradda saareynaa agabyada caafimaad iyo qalabka, qalabka dayactirka iyo qalabka, waxyaabaha sheybaarka, iwm.
Waxyaabaha aan soo saarno badanaa waxaa ka mid ah saliingaha (sirinji la tuuri karo, sirinji otomaatig ah, siliingaha cirbadaha oo lagala soo bixi karo, sirinjeerka badbaadada), xirmada baaritaanka degdega ah ee antigen, qalabka baaritaanka antibody, xirmada aruurinta muunada, xirmada ururinta candhuufta, tuubada dhiigga faakiyuunka, cvc, bacda kaadida , Waxyaalaha la tuuri karo ee aan la isticmaalin waxaa ka mid ah maaskaro wajiga, koofiyadaha bouffant, goonnada qalliinka, goonida go'doominta, goonnada bukaanka, jaakada booqdaha, jaakad shaybaar, guud ahaan, daboolka gacmaha, daboolka kabaha, sariirta sariirta, daboolka sariirta, daboolka barkinta, daboolka iwm. kuwaas oo si ballaaran loogu isticmaalo isbitaalada ama clinic.A All waxyaabaha caafimaad iyo qalabka caafimaadka & qalabka la maray ISO13485, oo waxaan ka helay shahaadooyinka ISO iyo CE hubi by "TUV" Germany, xitaa inta badan waxyaabaha our waa of FDA ansixiyay. Waxaan sidoo kale bixinnaa OEM sida ay macaamiisha ′ baarka u hayaan.
Iyadoo in ka badan 10 sano 'waayo-aragnimo ah ee warshadaha caafimaadka, waxaan u dhoofinnay USA, EU, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya iwm guud ahaan in ka badan 120 dal. Waxaanan ku kasbannay sumcad wanaagsan dhammaan macaamiishan adeeg wanaagsan iyo qiimo tartan.
Xarunteeduna tahay Shanghai, oo ah magaalada ugu weyn uguna casriyeysan Shiinaha, TEAMSTAND waxay maalgashaa 2 warshadood oo ku kala yaal Shandong iyo Jiangsu, waxayna lashaqeeyaan in ka badan 100 warshadood oo ku yaal Shiinaha. "Top 10 alaab-qeybiye caafimaad ee Shiinaha" waa ujeedkeena, Waxaa la rumeysan yahay in, shaqaalaha xirfadleyda ah, maareynta wanaagsan, qalabka casriga ah iyo nidaamka xakamaynta tayada adag, aan sameyn karno si ka fiican oo ka wanaagsan mustaqbalka.
Ku soo dhawow dhammaan asxaabta iyo macaamiisha adduunka oo dhan ee ku jira warshadaha caafimaadka si aad noola soo xiriirto!
Tayada ayaa ah shuruudaha ugu muhiimsan ee alaabada caafimaadka. Si loo hubiyo oo keliya wax soo saarka ugu tayada sareeya, waxaan la shaqeynaa warshadaha ugu aqoonta badan. Badeecadaheena intooda badani waxay leeyihiin shahaadada CE, FDA, waxaan kuu balan qaadeynaa qanacsanaantaada dhamaan qadka alaabtayada.
Waxaan bixinaa taageero dhameystiran bilowga. Kaliya maahan inaan u fidino badeecooyin kala duwan dalabyo kaladuwan, laakiin kooxdeena xirfadeed waxay gacan ka geysan karaan xallinta xalalka caafimaad ee gaarka ah. Qeybtayada hoose waa bixinta macaamiisha qanacsanaanta.
Hadafkeenu waa inaan gaarno iskaashi muddo dheer ah. Tani waxaa lagu dhammeeyaa oo keliya iyada oo loo marayo alaab tayo leh, laakiin sidoo kale waxay ku dadaalaysaa inay bixiso qiimaha ugu fiican macaamiisheenna.
Waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawino wax kasta oo aad raadineyso. Waqtigeena jawaabta waa dhakhso, markaa si xor ah u nala soo xiriir maanta wixii su'aalo ah. Waxaan rajeyneynaa inaan kuu adeegno.
Waxaan haynaa koox injineernimo xirfad leh oo u adeegta baahi kasta oo faahfaahsan.
Si aad u daboosho rabitaankaaga, fadlan runtii waxaad dareemeysaa lacag la'aan inaad nala soo xiriirto. Waxaad noo soo diri kartaa emayl oo si toos ah ayaad noo soo wici kartaa.